Preview:Zimbabwe Sables vs Kenya Simbas – Scrummage
Kenya Simbas are set to take on the Zimbabwe Sables in Bulawayo on Saturday 22 July 2017 seeking to continue with their winning streak in the Africa Gold Cup.
The two sides have managed to meet 16 times with the Zimbabweans enjoying a better record against the Kenyans as they have managed to win on 11 occassions and loosing on 5 occassions.
The last meeting between the two sides was in 2016 where the Kenya Simbas demolished Zimbabwe 61-15 in Harare in a Rugby Afrique encounter.Zimbabwe are currently sitting on 4th position in the Africa Gold Cup standings having amassed 6 points while Kenya Simbas are in 2nd position with 12 points,two shy of leaders Namibia.
In their last match,Zimbabwe let slip a 20-3 halftime lead to go down 31-26 to hosts Namibia in Windhoek while Kenya saw off Senegal 45-25 in a match staged in Nairobi.
The Simbas boast of having the current Gold cup top scorer in Darwin Mukidza who has managed to amass 63 points heading into match day four.Zimbabwe on their side have Takudzwa Kumandiza as their top scorer with 20 points and they will be hoping that he is yet again in good form during Saturday’s encounter.
Kenya vs Zimbabwe previous meetings
11 Jul 2016:Zimbabwe 15-61 Kenya
06 Jul 2014:Kenya 10 – 28 Zimbabwe
12 Nov 2013:Kenya 14 – 29 Zimbabwe
23 Jul 2011:Kenya 21 – 26 Zimbabwe
25 Jun 2011:Zimbabwe 42 – 24 Kenya
17 Jul 2010:Zimbabwe 18 – 23 Kenya
12 Jun 2010:Kenya 11 – 10 Zimbabwe
24 Jul 2004:Zimbabwe 24 – 15 Kenya
25 May 2003:Kenya 32 – 24 Zimbabwe
28 Sep 2002:Kenya 19 – 12 Zimbabwe
03 Jul 1993:Kenya 7 – 42 Zimbabwe
13 Aug 1989:Kenya 9 – 56 Zimbabwe
07 Aug 1987:Kenya 12 – 44 Zimbabwe
01 May 1985:Zimbabwe 15 – 13 Kenya
27 Mar 1982:Zimbabwe 15 – 12 Kenya
01 Jul 1981:Kenya 24 – 34 Zimbabwe
Related Items:Africa Gold Cup, Kenya Simbas, Namibia Rugby, Senegal, Zimbabwe Sables
Uganda coach wary of Namibia’s experience